Imincintiswano Yokunyuka Kwejubane | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
Imincintiswano Yokunyuka Kwejubane
ISpeed ​​Climbing yenze umdlalo wayo wokuqala we-Olimpiki, ngisho nenkundla yokudlala ibaluleke kakhulu kunakuqala Ishicilelwe ekuqaleni ku-Climbing.com Cabanga ngalokhu: Abagijimi bama-Olimpiki bathatha amamaki abo ekuqaleni komjaho wamamitha ayi-100. Isibhamu siqhekeka — futhi ahamba! Kepha linda: Ngokushesha sibona ukuthi umzila ngamunye wehlukile. Umzila ka-Usain Bolt uthambekele ekukhuphukeni!…
ISalt Lake City, e-Utah USA - 29 Meyi 2021 Bafike eSalt Lake City ukuzophula amarekhodi nokuwaphula abawenzile. Njengoba i-Perfect Descent Auto Belays inyukele phezulu odongeni, ozakwabo eqenjini le-Speed ​​Climbing lase-Indonesia badlale i-leapfrog ye-15m Speed ​​World yabesilisa kwi-Speed ​​World Cup yokuqala ye…
Umlando uyakhiwa njengoba isigaba sokuqala sabasubathi abagibelayo silungela ukugibela inkundla emidlalweni yama-Olympic yaseTokyo. Ngesimo sayo esithandwayo njengoMhlinzeki Osemthethweni we-Auto Belay kuMqhudelwano weNdebe Yomhlaba we-IFSC, i-Perfect Descent iqanjwe njengoMhlinzeki weSole Auto Belay weMidlalo yaseTokyo 2020. Funa i…
Ngu: Sean McColl, i-Olympic Rock Climber (CAN) Agasti 2019 - Izinyanga eziyisikhombisa ngaphambi kokuvalwa bengisanda kundizela ekhaya ngisuka kumaWorld Championship lapho ngithole khona i-The 2020 Olympic Games. Abangani bami bangenzela umcimbi wamangaza futhi konke kwakuhamba njengoba bekuhleliwe. Ngibe nenhlanhla yokufaneleka emzuliswaneni wokuqala we…
Nge-PD® Athlete, umgijimi we-Kai Lightner Professional kanye nomqali we-Perfect Descent uKai Lightner usinikeza ithuba lokubheka indlela yakhe yokuziqeqesha yansuku zonke. UKai wephula isu lakhe lesikhawu lokwakha amandla nokukhuthazela ukulungiselela amaphrojekthi wokuqwala kanzima. UKai ungenele umncintiswano wakhe wokuqala eneminyaka eyisithupha futhi akazange ayeke ukukhuphuka. Isikhathi esiyishumi nambili…
Ngu: Sean McColl, i-Olympic Rock Climber (CAN) Bengifuna ukuthola iziqu futhi ngincintisane kuma-Olympic Games ngaphambi kokuthi ngikhumbule, ngikhumbula ngivuka ekuseni futhi ngibuke ama-Olimpiki usuku nosuku nomndeni wami. Ngakhulela emkhakheni wezemidlalo futhi ngatholakala nginyuka ngineminyaka eyi-10…
Uqale nini ukukhuphuka? Noma ngingaqali ukukhuphuka ejimini ngaze ngaba neminyaka eyi-6, ngahlala ngisenkingeni yokuqwala izinto KAHLE ngaphambi kwalokho. Ukusuka ekukhuphukeni ngamasango ezingane endlini yethu (ngaphambi kokuba ngihambe) ukuya ekudleni isidlo sasemini ku-hoop yebhasikidi ku-driveway yethu, umama wami…
I-Q & A noSean McColl
Uqale nini ukukhuphuka? Ngaqala ukukhuphuka ngo-1997 nomndeni wami. Ikilabhu lethu lomphebezo belivalile besifuna ukuthola okuthile singawenza njengomndeni. Sathenga ubulungu bonyaka ejimini yokuqwala yendawo, futhi ngakuthanda ngaso leso sikhathi. Yini ekugqugquzela ukuba ukhuphuke futhi kungani ...
I-Q & A noJohn Brosler
Uqale nini ukukhuphuka? Ngaqala ukukhuphuka emakamu ehlobo ngisemncane futhi ngajoyina iTeam Texas lapho ngineminyaka eyishumi. Ngiqale ukungenela umncintiswano ngo-10 ngineminyaka engu-2009. Kungani uqale ukuncintisana futhi kungani uqhubeka nokwenza? Ngaqala ukuncintisana ekuqaleni ngoba umqeqeshi wami…
Uxhaso ngo-2020: Ukuncintisana Kwejubane lasePoland
Njengoba imikhawulo yobhadane incipha ezingxenyeni eziningi zomhlaba, iPoland muva nje ibambe umncintiswano wesifunda we-Speed ​​Climbing. Onyakeni oswele ithuba elibalulekile lokuthi abasubathi bancintisane sakujabulela ukuxhasa umcimbi ekhaya likaWorld Champion Speed ​​Climber no-Olympian, u-Aleksandra Mirosław. NgoMgqibelo, Agasti 29, omkhulu…